Naranjo de Bulnes: njirimara, geology na mkpa | Netwọk Mgbasa Ozi
Taa, anyị ga-ekwu maka otu ọnụ ọnụ ugwu dị na otu ebe kachasị akara ngosi nke Picos de Europa National Park. Ọ bụ ihe Pico Urriello, mma mara site na aha Naranjo de Bulnes. Ọ bụ otu n'ime ugwu ndị ama ama na ogige mba a ma dị na etiti obodo. Ọ dị elu nke 2518 mita ma gbagoo maka oge mbụ na 1904. Kemgbe ahụ, ọnụ ọnụ a ghọrọ otu n'ime ihe ndị dị mkpa na mmalite nke ugwu ugwu Spanish.
N'isiokwu a, anyị ga-agwa gị njirimara, njirisi ala na ọchịchọ ịmata ihe nke Naranjo de Bulnes.
2 Nchọpụta ọdịdị obodo na ọdịbendị nke Naranjo de Bulnes
3 Otu esi enweta isi nke Naranjo de Bulnes
4 Ugwu a ma ama
Ọ bụ nzuko nke mejupụtara monolith calcareous nke etolitere maka ọtụtụ akụkụ site na nkume nzu nzu. Nkume ndị a dị oke ma microbially wuru. Ihe ndị a sitere na nnukwu ikpo okwu nwere ọdịnaya dị elu nke carbonates mmiri ma mepụta ya n'oge oge carboniferous. Mbuli elu na ọdịda nke oke osimiri nwetara n'oge oge Carboniferous ọ kpatara emersion nke elu nke ikpo okwu na karst usoro mepụtara.
Na enyemaka nke mbụ, oghere ndị ahụ sitere na usoro nkwado na ihe ndị sitere na Oge Permian. A na-amata ihe ndị a ka ha nwere oghere na-acha ọbara ọbara na ụrọ. Njirimara kachasị nke Naranjo de Bulnes bụ na ọ nwere ọdịdị ọdịdị ya dị ka mmalite sitere na imepụta glacial. Ihe osise a na - eme na glacier na - ahụ maka General General nke geology nke teren na - ewere na glaciations niile. Dum n'ógbè nke Picos de Europa ahụhụ glaciations n'oge oge quaternary, nke ikpeazụ glaasi ya pụtara ihe dị ka afọ 38.000 gara aga.
Ruo oge mgbe glaciations malitere ime, akụkụ elu nke Central Massif kpuchie ya na okpu ugwu. Elu elu ya bụ ebe nkume jupụtara na yeros nke asụsụ abụọ na-agba agba gburugburu. O nwere mgbidi na-egbu maramara ma ọ nweghị nsọtụ. Ihe ndị a bụ atụmatụ dị iche iche na-egosi arụ ọrụ abrashị nke asụsụ glacial na mgbidi nke Naranjo de Bulnes. Ntucha glacier nwere njirimara pụrụ iche nke na-enye ndị ọkà mmụta ala aka ịmata nguzobe nke ọ bụla n’ime ha.
Nchọpụta ọdịdị obodo na ọdịbendị nke Naranjo de Bulnes
Dika aturu anya, elu nke nwere njirimara ndia, ihe si na usoro ichoputa ma ama ama dika ihe di egwu na ugwu ugwu Spanish, nwere mmasi banyere ala, omenala na nke ndi Ọ bụrụ na anyị agakwuru mmasị ala nke Naranjo de Bulnes nwere, anyị ga-ahụ na ọ bụ nke ụdị geomorphological. Geomorphology nke elu a bụ ezigbo ihe atụ nke nunatak. The nunatak bụ ụdị okwute na-eme n'ime oke ugwu. Ejiri okpu ugwu a site na iweta mgbidi mara mma nke ukwuu site na ọrụ ice ice.
Oyi kpọnwụrụ akpọnwụ emee ka abrasion jupụta na nkume. N'ihi eziokwu ahụ bụ na ọtụtụ glaciations emeela na elu a, abrasion nke ice na-eme ka nkume niile dị ọcha ruo mgbe agbanweela usoro mmụta ha. Omume a bụ njirimara nke glacier na-adịchaghị mma, n'otu oge ahụ, na-abụ ihe akaebe dị ugbu a iji nwee ike ịkọwa mgbanwe nke ike mgbanwe nke Quaternary
O nwekwara ihe ndi ozo na-adighi nma banyere ala dika akuko na omenala. Site na ọdịbendị na mmekọrịta mmadụ na ibe ya, enwere ike ịsị na ọ nwere njirimara dị mma iji bụrụ ala mara mma. A na-ahụta ya dị ka otu n'ime ihe nnọchianya na ama ama nke Picos de Europa National Park. Anyị ga-agbakwunye akụkụ akụkọ ihe mere eme kemgbe elu rigoro n’elu oge mbụ n’afọ 1904 site n’aka Pedro Pidal na Gregorio Pérez. Ndi ugwu abuo a bu ndi guzobere ugwu ugwu Spain.
Otu esi enweta isi nke Naranjo de Bulnes
Enwere ọtụtụ ụzọ iji banye na mpaghara Vega de Urriellu. Ikekwe nke kachasị mfe ga-abụ ịhapụ ụgbọ ala n'obodo Sotres. Site n'ebe ahụ, anyị nwere ike ịga ije n'okporo ụzọ dịnụ wee banye na ndị oyi nke Cabao. Mgbe e mesịrị, anyị ga-agafe osimiri Duje ma site ebe ahụ, anyị nwere ike ịrịgo na njem Pandébano ebe egwu ahụ kwụsịrị ma ụzọ amalite.
Site na ebe a anyị nwere ike ịhụ Urriellu ma ọ bụrụ na ị gbasoo ụzọ ị ga-eru obodo nke Bulnes. Enwekwara uzo ndi ozo ma ha di mgbagwoju anya.
Agbanyeghị na ọ bụghị ugwu kachasị elu na Ugwu Cantabrian, O nwere elu nke mita 2.519 ma ewere ya dị ka otu n'ime ọnụ ọgụgụ kachasị mma. Karịsịa ihe na-eme ka elu ọnụ a ma ama bụ 550 mita nke mgbidi kwụ ọtọ na ihu ọdịda anyanwụ ya. Dịka anyị kwurula na mbụ, mbido mgbidi a na-eme site na isi mmalite nke Quaternary na abrasion nke ice na gbazee.
Ugwu a ma ama
Mgbe mbụ ịrị ugwu na 1904, ụfọdụ ndị ọzọ soro. Ugboro abụọ ahụ weere ọnọdụ na 1906 ma ọ bụ Dr. Gustav Shulze, bụ onye ọkà mmụta banyere ala na German onye ugwu ugwu. O mekwara ya maka ihu ugwu ma ọ bụ naanị ya ka o mere. Ọ bụ onye mbụ ugwu ugwu jiri peg nwee ike ịgbada ihu na ndịda. Onye ọkà mmụta banyere ala a kọwara ọrịrị ahụ dị ka nke dị mkpụmkpụ ma sie ike.
Na 1924, onye ugwu nke aha ya bụ Víctor Martínez Campillo nwere ike imeghe ụzọ ọhụrụ, dị mfe karị nke dị n'akụkụ aka ekpe nke ihu ndịda. Kemgbe ahụ a na-akpọ ya Vía Víctor. Otu n'ime mmụba ikpeazụ a mere na 1973 ma ndị mgbasa ozi gbasoro ebe niile. Ihe na-adọrọ mmasị banyere ịrị elu a bụ na ọ dị nkenke ma ọ gbuola ọtụtụ mmadụ ma mepụta ọtụtụ nnapụta, ọ dị oke mma.
Dị ka ị pụrụ ịhụ, na Naranjo de Bulnes bụ otu n'ime ebe kachasị mara amara na ama ama na Spain. Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Geology » Naranjo de Bulnes
GIS (Usoro ihe omuma banyere ala)